Bayaanka: Maamulka Trump wuxuu isku dayayaa inuu cabsi galiyo "Magaalooyinka Nabdoon" - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Press Release > Bayaan: Maamulka Trump wuxuu isku dayayaa inuu cabsi galiyo "Magaalooyinka Nabdoon"
Bayaan: Maamulka Trump wuxuu isku dayayaa inuu cabsi galiyo "Magaalooyinka Nabdoon"
Isku-xirka Jawaab-celinta Deg-degga ah ee 'CO Rapid Network' ayaa la diyaariyey, waxay ugu baaqeysaa Golaha Guurtida inay taageeraan deegaannada, la xaddido maalgelinta ICE
Denver - Colorado (Sebtember 29, 2020) Toddobaadkan, Washington Post ayaa soo warisay warbixinnada Socdaalka iyo Kastamka Hirgelinta (ICE) waxay u maleynayaan inay xirayaan oo ay dhibaateyn doonaan dadka ku nool xuduudaha iyadoo leh siyaasado xaddidaya wada shaqeynta ICE iyo fulinta sharciga maxalliga ah. Shabakada Jawaabta Degdega ah ee Colorado, oo ay xubin ka tahay Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado, waxay cambaareyneysaa hadalada, seddex sano ka dib markii maamulku isku dayay hawlgal la mid ah.
"Weerarradan ayaa ah isku day dhib badan oo lagu cabsi gelinayo magaalooyinka ilaalinaya xuquuqda dastuurka isla markaana la istaagaya xubnaha bulshada muhaajiriinta ah," ayuu yiri Gladis Ibarra oo ka tirsan Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado. “'Tani waxay si cad u tahay talaabo siyaasadeed oo uu Madaxwaynuhu ugu tala galay inuu ku cago jugleeyo magaalooyinkii qaaday talaabooyin macquul ah si ay naftooda iyo dadka soogalootiga ah uga badbaadiyaan xad gudubka dawlada dhexe iyo xadgudubyada ICE. Waxaan sii wadi doonnaa inaan u istaagno waxa ugu fiican Denver guud ahaan. ”
Weerarradan ayaa loo qorsheeyay in ay dhacaan toddobaadyada soo socda ayna sii xoogeystaan ​​inta lagu jiro doorashada sida lagu sheegay warbixinta. Jennifer Piper, oo ka tirsan Guddiga Adeegga Saaxiibada Mareykanka ayaa yidhi: "Iyada oo loo marayo Socdaalka Nation oo dhan Ameerika way arki kartaa imika, howlaha ICE guud ahaan waxay shabaqeen shabaq ballaadhan, inta badanna waxay adeegsadaan xeelado dagaal iyo khiyaano oo keena kala tagga jumlada ee qoysaska iyo masaafurinta shaqaalaha muhiimka ah." (AFSC). “Denver iyo guud ahaan dalka, muhaajiriinta maxalliga ah iyo bulshooyinka muwaaddiniintu waxay si adag ula garab taagan yihiin mas'uuliyiinta aan doorannay ee abuuray magaalooyin Ammaan ah oo qof walba uu gacan ka geysan karo caafimaadka magaalooyinkeenna. Waxaan ka dalbaneynaa Koongareeska in la abuuro waddo dhalasho isla markaana lagu xukumo kordhinta miisaaniyadda qashinka iyo burburka ee ICE. ”
"Hadalada maamulka wuxuu isku dayayaa inuu kala qaybiyo dhaqdhaqaaqa muhaajiriinta isagoo dambi ka dhigaya dhamaan kooxaha dadka isla markaana u dhaqmaya sidii iyagoo aan u qalmin nidaam sharci ah ama sharaf bini aadam," ayay tiri Angelica Prisciliano oo ka tirsan Isbahaysiga Dadka ee Colorado. “Laakiin ma iibsaneyno. ICE horeyba waxay si joogto ah u bartilmaameedsaneysay Denver iyo agagaaraha dhulka hoostiisa ah xitaa kahor intaysan magaaladu dhaafin siyaasadeeda badbaadada bulshada, waxay sameynayeen iyagoon ujeedo laheyn. Magaaladeenu waxay ugu nabadgelyo badan tahay markaan dhamaanteen bulshada ka mid noqono iyo marka dowladaha hoose aysan ka qeyb galin fulinta siyaasada socdaalka, waana taas mida ay siyaasada Denver hubiso. Haddii aad aragto hirgelinta ICE, wac khadka tooska ah si toos ah si aad u soo wargeliso 1.844.8648341. ”
Abaabulayaashu waxay tilmaamayaan astaamaha xaqdarrada iyo midab kala sooca ah ee loo adeegsado go'aaminta cidda mudnaanta u leh masaafurinta. Jordan Garcia oo ka tirsan AFSC ayaa sii faahfaahiyay “Maxay ku qaadataa in lagu galo liiska ka mid ahaanshaha baandooyinka? Sarkaalka kheyraadka ee iskuul ama goob gawaarida la dhigto wuxuu arkaa wiil dhalinyaro ah oo leh tattoo, la hadlaya seddex ama in ka badan oo dhalinyaro ah meel gees ah, taasna waa ku filan tahay in lagugu galiyo keydka baandooyinka ay ICE marin u leedahay. Shirkadaha sida Palantir waxay magacyadaas u qotaan asxaabta warbaahinta bulshada, iyagoo kuwa kale u jiidaya shabakadda. Macluumaadkan macluumaadka waxaa lagu caddeeyey in aysan ahayn wax ka badan midab kala sooca. ”
Marka la eego weeraradaas, Shabakada Jawaab celinta Degdega ah ee Colorado waxay wacad ku martay inay sii wadi doonto shaqadooda ku saabsan tababarada "ogow xuquuqdaada", abaabulka shabakadaha jawaabta degdega ah iyo u doodista isbeddelada siyaasadeed ee xadidaya wadajirka u dhexeeya ICE iyo fulinta sharciga maxalliga ah.